Kooxa Hubeysan oo rag ka tirsan Nabad Sugidda Soomaaliya ku dilay Muqdisho. |
Kooxo dhallinyaro ah oo bastoolado ku hubaysan ayaa xaafadda Suuq-Bacaad ee magaalada Muqdisho ku dilay labo nin oo ka tirsanayaan ciidamada nabad sugidda ee dowladda federaalka Soomaaliya.
Labada nin ee lakhaarijiyay ayaa la socday gaari ay wateen, waxaana la sheegay in ay rasaas ku fureen saddex nin oo dhallinyaro ah oo joojiyey gaarigii ay wateen ragga la dilay, kadibna rasaasta huwiyay.
Ragga Hubeysan ee geestay dilka xubnaha katirsan Nabad sugidda ayaa ka baxsaday goobta ay dilka ka geesteen, iyada oo durbadiiba ay goobta gaareen ciidamo ka tirsan dowladda oo goobtii ka qaaday ragii sida layaabka leh loo khaarijiyay.
Taliska nabad sugidda Soomaalida wali kama hadlin mana jirto cid sheegatay weerarka lagu khaarijiyay labadaasi ruux, balse waa loo maleynaayaa inay ka dambeeyeen cidamada Alshabaab waxaana arintaani noqneysaa markii ugu horeysay ee gudaha Muqdisho tariikhda dhaw maalin cad gaari ciidan wato lagu joojiyo ee waliba dil lagu fuliyo kooxihii watay